Tre Kronor oo ku guuleysatay horyaalka dunida - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Horyaalka xeegada 2018 sawir: Claudio Bresciani/TT
Tre Kronor oo ku guuleysatay horyaalka dunida
La daabacay måndag 21 maj 2018 kl 09.56
Tre Kronor oo mar kale ku guuleysatay horyaalka dunida xeegada barafka. Tre Kronor ayaa rigoore uga guuleysatay Switzerland.
Xulka qaranka Sweden ayaa fiidkii axada hanatay guusha finaalka horyaalka xeegada barafka. Sweden ayaa ka badisay Switzerland 80 daqiiqo kadib. Switzerland baa hogaanka ciyaarta qabatay laba jeer iyadoo Sweden ay ku guuleysatay iney labadaa jeerba dib u soo laabato.
Charles Berglund, wariyaha barnaamijka ciyaaraha (radiosporten).
– Ciyaarta oo aheyd mid aad u xiise badan ayey labada kooxood ku kala badin waayeen wakhtiga caadiga ahaa ee loogu tala galay ciyaarta taasoo keentay in ciyaarta lagu kordhiyo 20 daqiiqo. Jawiga hoolka ciyaarta ayaa ahaa mid cadaadis badani ka muuqdo. Balse markii natiijadu guul ku dhamaatay waxey taa keentay farxad weyn, ayuu yiri wariyaha radiosporten Charles Berglund.
Switzerland oo aan laga fileyn in ey gaarto finaalaha ayaa muujisay dadaal badan balse ugu dambeeynti iska qaban kari weyday Sweden.
– Kooxda Switzerland ayaa la timid ciyaar aad u wanaagsan iyagoo hagayey ciyaarta inti ay awoodeen. Balse waxa caddeyd in kooxda Sweden aheyd mid aan la celin karin iyadoo la dareemayey in wakhti kasta ay suura gal tahay in Sweden dhaliso goolki guusha, ayuu yiri Charles Berglund.
Tre kronor ayaan marna laga badin inta tartanku socday, iyagoo inta tartanku socdayna xoojin ka helay ciyaar yahana ka ciyaara National Hockey League (NHL) ee Patrik Hörnqvist, Filip Forsberg, Viktor Arvidsson iyo Mattias Ekholm. NHL waa tartarka kubada xeegada ugu weyn waqooyiga Ameerika.
Sweden baa kuu guuleysatay iney difaacdo koobka dahabka horyaalka dunida kubada xeegada oo ay horey ugu guuleysatay sanadki hore. Waa markii labaad oo ay Sweden difaacato dahabka horyaalka dunida, marki koowaadna waxey aheyd sannadki 1992.